राजश्व नतिर्ने क्यासिनोको टेबलमा नेपाली, यसरी बन्दैछन् कंगाल – रिपोर्टर्स नेपाल
२०७६ श्रावण ४ शनिबार, १०:०२
राजश्व नतिर्ने क्यासिनोको टेबलमा नेपाली, यसरी बन्दैछन् कंगाल
२०७५ माघ २७ गते प्रकाशित, l १०:३४
मघ २७ । माठमाण्डौ । हाम्रो देशमा जुवा खेल्नुलाई गलत मात्रै मानिदैन, गैर कानुनी पनि ठानिन्छ । तर, आधुनिक जुवा भन्दै क्यासिनो चलाउन र जुवा खेल्न भने पुरै छाडा छाडिएको छ । त्यो पनि ट्याक्स नै नतिरी । यतिमात्रै होइन नीति नियम पुरै मिचेर अबैध धन्दा चलाइरहेका छन् क्यासिनोहरुले ।
क्यासिनो अर्थात आधुनिक जुवा घर । जुन विदेशीलाई मात्रै खेल्न दिने भन्दै करिब २५ वर्ष अघिदेखि नेपालमा सञ्चालित छन् । तर, यी क्यासिनोमा ६० प्रतिशत भन्दा ज्यादा ग्राहक नेपाली नै हुने गरेका छन् ।
नेपाली छिर्न समेत दिदैनौ भन्ने क्यासिनोको टेवल टेलवमा नेपालीहरु भेटिन्छ । तर, यसको अनुगमन करिव शून्य जस्तै छ । नेता, कर्मचारी र प्रहरीसँगको सेटिङमा क्यासिनोहरुले अबैध धन्दा चलाइरहेका छन् । र, सयौँ नेपालीको परिवारलाई बिल्लिबाठ बनाइरहेका छन् । नयाँ कानुन नबन्दा अदालतको आदेशको आडमा क्यासिनाहरु कर नतिरी सञ्चालनमा रहेका छन् ।
अपराध कारखाना बनेको क्यासिनोमा हारेपछि अपराधी बनेकाहरूको फेहरिस्त लामो छ । डा. उपेन्द्र देवकोटाकी छोरी, डा. भक्तमान श्रेष्ठ, ओमकार भट्टचन, महेश मुरारकालगायतका व्यक्तिका अपहरणकारीहरूले असुलेको फिरौती रकम क्यासिनोहरूमा उडाएका थिए । वीरेन प्रधानले क्यासिनोकै आवश्यकता पूरा गर्न पैसाका लागि आफ्नै छात्रा ख्याति श्रेष्ठको अपहरण र हत्या गरेका थिए भने स्पाइडर ग्रुपका नाममा आतङ्क मच्चाउने सन्दीप पाठक (मिलन लामा), अमर टण्डन र उदय सेट्ठीको अखडा क्यासिनोहरू नै थिए । यस विषयमा सरकारलाई थाहा भए पनि आँखा चिम्लिने गरेको छ । क्यासिनो व्यवस्थापनको नजराना प्रहरीका वडादेखि प्रधान कार्यालय र गृहमन्त्रालयको प्रशासनिक तथा राजनीतिक नेतृत्व तहसम्म पुग्ने गरेको छ ।
सरकारले बन्द गरेको क्यासिनो खुलाउन माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिनेहरुलाई सर्वोच्च अदालतले यथाअवस्थामै चलाउन अनुमति दिएको थियो । यहि आदेशलाई टेकेर अहिले पनि केहि क्यासिनोहरु नविकरण समेत नगरि चलिरहेका छन् । जसका कारण क्यासिनोले ब्रहलुट गर्न थालेको ५ वर्ष पुग्नै लाग्यो ।
क्यासिनो हाल नेपालमा १० वटा पुगेका छन् । १२ मिनि क्यासिनो छन् । यी मध्ये अधिकांश क्यासिनोले अबैध धन्दा चलाउने गरेको जानकारहरु बताउँछन् । क्यासिनोले पर्यटक भित्र्याउँछ, स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्छ भन्ने तर्कका आधारमा चलिरहेका छन् । तर, क्यासिनोका झन्डै ६० प्रतिशत ग्राहक नेपाली नै हुने गरेका र नेपालीलाई नै कंगाल बनाउने तथ्यप्रति भने सरकारले आँखा चिम्लि रहेको छ ।